Vhiki rapfuura, ndakave nemufaro wekusangana nekutaura naJeff Quipp weSejini Yevanhu, SEO uye Internet Kushambadzira yakasimba. Jeff akagadzirisa pani pamatanho, ongororo uye midhiya enhau andaive ndiri paKutsvaga Kushambadzira Expo uye eMetrics Musangano muToronto naGil Reich, VP weChigadzirwa Management pa Answers.com. Jeff akaunza kiyi imwe - chinangwa chemushanyi, chimwe chinhu chatinogara tichiedza kunzwisisa isu
Chipiri, February 15, 2011 Svondo, October 19, 2014 Douglas Karr
CMO Survey inounganidza nekuparadzira mafungiro evashambadziri vepamusoro kuitira kufanotaura ramangwana remisika, kuteedzera kushambadza, uye kugadzirisa kukosha kwekushambadzira mumafemu uye munharaunda. Slide yakakosha, yakataurwa neMushambadziri Pilgrim, itarisiro yezvemagariro enhau… kukura kusingachinji kunotsigirwa zvakanyanya mukati meongororo. Yakavambwa muna Nyamavhuvhu 2008, Iyo CMO Survey inoitiswa kaviri pagore kuburikidza neInternet ongororo. Mibvunzo inodzokororwa nekufamba kwenguva
Muvhuro, Zvita 20, 2010 Chitatu, June 24, 2015 Douglas Karr
Yasvika nguva yekupera kwegore. Gore rino rakatipa zvakawanda zvekushatiriswa pamusoro… nekuenderera mberi kwekutonga kwemamwe makambani mahombe kusvika kune isingagamuchirike mafambiro enhau. Hezvino zvimwe zvinhu zvinonyanya kundikanganisa, saka ngatiitei kuti zvirege kuitika muna 2011: MIRA KUTSVAGA. Sezvo unoedzwa sezvauri, chengetedza minwe yako kubva paCAPS LOCK. Kana ndikazvinyora kubva kuemail yako, usatumira email yekusimbisa kwandiri. Tsiva